နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Dust Collector(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Dust Collector ထုတ်ကုန်များ)
Dust Collector - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Dust Collector ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Dust Collector / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Dust Collector များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 41000 / Bag/Bags
tag ကို: သံမဏိ Bag Filter ကို , သွေးခုန်နှုန်းသံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောအပူချိန်သံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး
ခြောက်သွေ့အမျိုးအစားမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဖြစ်သောသံမဏိသွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း, မြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှားဘို့စိမ်အိတ် filter ကိုဒြပ်စင်၏ filtering ကို function ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ (0.3um မြေမှုန့်အဘို့, ~ 99,5% 95%...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12000 - 78000 / Bag/Bags
tag ကို: အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Cement , ဘိလပ်မြေစက်ရုံ Pulse Deduster , Long ကအိတ် Filter ကို Pulse
ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်သွေးခုန်နှုန်း type ကိုတာရှည်အိတ် filter ကို 1. LCM ရှည်လျားအိတ်သွေးခုန်နှုန်းမိုးရွာသွန်းမှုရိုးရာအတိုသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို၏အခြေခံပေါ်မှာဖွံ့ဖြိုးအသစ်တစ်ခုကိုအကျိုးရှိစွာအိတ် filter ကိုဖြစ်ပါတယ်။ 2,...
ZC စက်မှု rotary ပြားချပ်ချပ်အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1500 / Set/Sets
tag ကို: ZC Flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , Rotary Flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး
ZC အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်းမှုတ်ကိုပြန်ရိုက်ထည့် မြေမှုန့်စုဆောင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာမြင့်မားစုဆောင်းခြင်းထိရောက်မှု, အသေးစားခုခံ,...
ပြောင်းပြန်ထိုးနှက်ကတ္တရာစက်ရုံအိတ် filter ကိုဆုံလည်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 19800 / Set/Sets
tag ကို: ကတ္တရာသုံးစက်ရုံအတွက် Deduster , ကတ္တရာစေး Bag Filter ကို , နောက်ကျောအိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေညင်းတိုက်ခတ်ခြင်း
လေမှုတ်စက်အိတ် filter ကိုနှင့် rotary လညျးမီးဖိုမြေမှုန့်စုဆောင်း
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10000 / Set/Sets
tag ကို: လေမှုတ်စက် Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , Rotary လညျးမီးဖိုဖုန်ကောက်ခံရေး , ခြောက်စက် Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Slewing
Rotary လေမှုတ်စက်နှင့် rotary လညျးမီးဖိုအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း အိတ် filter...
ဖုန်မှုန့် filter ကိုစက်မှုဇုန်မြေမှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: စက်ရုံဖုန်ကောက်ခံရေးစနစ် , စက်မှုဖုန်စနစ် , စည်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးခေါက်
Dedusting ဖြစ်စဉ်ကို 1. ဖမ်းခြင်းနှင့်ခြားနားအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို (1) ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ကျမ်းပိုဒ်၏စင်မြင့်။ အနှစ်သာရဖုန်မှုန့်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု၏စင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။...